China Acrylic LED neon sign open with pane-MYI002 Ukwakha nefektri | UMeiyi
Inombolo imodeli: I-MYI002 into: Isibonakaliso esivulekile se-neon ye-LED
1. Izibani zethu ezikhanyayo ze-ultra zibonisa ngokufana okuhle, ukulingisa izibani ze-neon nazo zonke izinzuzo zezibani ze-LED.
2. Ikhithi ephelele: Kubandakanya ukunikezwa kwamandla; i-hardware elengayo (izingwegwe ezi-2 “S”, amaketanga amabili alenga); nokulawula okukude (ON, OFF, flashing mode).
3. Sinikeza amaklayenti iwaranti enomkhawulo yonyaka ongu-1.
4. Kulula ukuyifaka: Akukho ukusetha okuyinkimbinkimbi noma ukufakwa. Vele unamathisele iketanga elenga, xhuma intambo yamandla, bese ucindezela inkinobho yamandla. Awekho amabhethri adingekayo. Uphawu lwakhelwe ukusetshenziswa endlini kuphela.
5. Hhayi uphawu lwe-neon: Uphawu lwethu oluvulekile lwe-elektroniki alusebenzisi ukukhanyisa kwe-neon okuphelelwe yisikhathi. Ubuchwepheshe be-100% be-LED busho ukukhanya okungaphezulu kwamandla amancane, impilo ende enokugcinwa okuncane, nokulimaza okuncane emvelweni uma kuqhathaniswa nezimpawu ezivulekile ze-neon.
6. Isivivinyo esikhethekile kumakilabhu amabhizinisi aphezulu, amahhotela, amahhotela, imiphakathi
Izimpawu ezivulekile ze-neon ziwusizo olukhulu, zisiza ukudonsa ukunaka kwabantu. Kuhle ukusetshenziswa ezindaweni zomphakathi isikhathi eside.
Ukukhanya kwe-LED: 20000-25000MCD
Ukusetshenziswa kwamandla: 24W
I-Voltage: Ukufaka: 100-240V ~ 50 / 60HZ Okukhiphayo: 12V 2A
Ibanga Remote: 98 'nge-antenna up, 20' nge-antenna phansi
UKUBAMBA KWESO: I-AGPTEK Neon Open Signs iyakhanya kakhulu futhi iyamangaza. Ibhodi lezimpawu ezivulekile lizoheha abaningi abadlulayo! Yandisa izimbangi zakho ngaleli bhodi elikhanyisiwe bese uthola abathengi abasha nababuya beza ngobuningi ebhizinisini lakho.
IZIMODI ZOKUKHANYA EZIMBILI: Ibhodi lezimpawu ezivulekile linokukhanya oku-Flashing noma okuqinile ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene. Shintsha phakathi kwezindlela ezimbili ezihlukile, ezimile noma ezicwayizayo, ukuheha zonke izinhlobo zamakhasimende, emini noma ebusuku.
UKONGA AMANDLA: Ukusebenza kahle kwamandla bese ugcine izindleko zakho! Kungcono kunemikhiqizo ye-neon efanayo ngenxa yesilinganiso sokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
KULULA UKUSETSHENZISWA: Iza nensimbi engagqwali elengayo. vele ungene bese uvula iswishi, ukhanyise ngokushesha iwindi lakho lesitolo sangaphambili ngophawu lwakho olusha, olukhazimulayo. Ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela.
ISICELO NESIQINISEKISO: Isibani esivulekile sangaphandle esivulekile silungele i-Glass Window, i-Walls, i-Display case, i-Shop, i-Cafe Bar, i-Bar, i-Hotel… Yini enye, esiyinikeza iwaranti yeminyaka emibili.
Langaphambilini I-acrylic LED neon evulekile uphawu nge ellipse -MYI003
Olandelayo: I-acrylic LED neon evulekile uphawu ngesikrini sokuskrola-MYI007
U-Abierto uvule incwadi ebomvu ebomvu nomngcele oluhlaza-M ...
I-acrylic LED neon evulekile uphawu nge-arc namabhasi